Izinhlelo ezi-Flexible & Accredited Online Degree »iHodges University
Categories: Isiqondisi Esiku-inthanethi
Siseqophelweni eliphambili lemfundo eku-inthanethi!
EHodges University, siyabona ukuthi ukufunda ezweni lanamuhla lomsebenzi omatasa namasheduli omndeni kungenza kubonakale kuyinselele ukubuyela esikoleni. Kungakho sakha kabusha izinhlelo zethu eziningi zekhempasi ukuze zithathwe ku-inthanethi. Ukuvumelana nezimo ngenkathi uzuza iziqu zakho kuyindlela engcono kakhulu yokuthi ukwazi ukuphumelela, futhi siyakwazi. Abanye abafundi abadala bahambe ngendlela efanayo oyicabangayo futhi bathole impumelelo yabo ngezinhlelo zeHodges 'online degree.
Isikhungo seBachelor Degree: Ama-Bachelor we-Inthanethi athengeka kakhulu ku-Graphic Design ka-10
Izikole ezihamba phambili: Ama-Bachelor ama-25 ahamba phambili ku-inthanethi ezinhlelweni ze-cybercrime
Ukubuyekezwa Okuhamba Kakhulu Kwekolishi: Izinhlelo ezi-Top 25 ze-Bachelor's Online ku-Graphic Design
Izikole ezihamba phambili: Iziqu ze-Software Best ze-Bachelor's Online ze-2020
Isikole Esihamba Phambili SaseParalegal: Izinhlelo ezi-10 eziphezulu ezihamba phambili ze-Paralegal Degree Programs
U U-inthanethi: AmaKholeji Axhumaniseka Kakhulu e-2019 Weziqu Zezomthetho
Umhlahlandlela Wokutholakala Kwekholeji: Amakolishi aphezulu we-2020 e-inthanethi eFlorida
Izinhlelo ezi-inthanethi eziphezulu
Uyemukelwa kuhlelo lwe-English English Grammar lweHodges University, uhlelo olulandelanayo lokuqonda amaphethini ohlelo lolimi lwesiNgisi kusuka kumazinga ayisisekelo kuya kwamakhono aphambili. Uhlelo lwethu oluzihambela ngokwalo ku-inthanethi lwenzelwe ngokukhethekile izikhulumi zabantu abadala ezingezona isiNgisi ukuze ziqonde uhlelo lolimi futhi zikhulume isiNgisi ngokuzethemba. Thola amakhono owadingayo emabizweni, tento, imishwana,…
Ukubuka konke kwezinhlelo ze-inthanethi
Izinhlelo ezihola phambili ze-Leading-Edge Online Degree
Izinzuzo Zokuhambela AmaHodges U Ngezinga Lakho Eliku-inthanethi noma Isitifiketi
Ngoba senzelwe izindlela zethu zeziqu zabafundi abaku-inthanethi, uzothola izinzuzo eziphakeme kunamanye amanyuvesi aku-inthanethi.
Osolwazi bayatholakala ukuphendula imibuzo yakho. Siyunivesithi esebenza ngokugcwele ehlinzeka ngezinhlelo zendabuko neziku-inthanethi. Isikhundla sethu sizenza sitholakale kuwe ukuze uphendule imibuzo yakho futhi sikusize uphumelele. Futhi, ubuhlakani bethu budlula indlela yokufundisa eqinile edingekayo ekuqinisekisweni kwesifunda nohlelo.
Izinhlelo zethu zeziqu zenzelwe ngokuphelele abafundi abadala. Ukuvumelana nezimo kuzo zonke izinhlelo yilokho okusenza sehluke. Asibona nje eyunivesithi enikela ngezifundo eziku-inthanethi. Siyunivesithi ezibophezele empumelelweni yakho.
Ngeke ube wukuyekethisa ikhwalithi ukuze kube lula. Siyinyuvesi eku-inthanethi evunyelwe esifundeni. Ukugunyazwa kwesifunda kunzima kakhulu futhi kudinga imiphumela yabafundi edlula amazinga kazwelonke okugunyazwa. NgeHodges U, uthola imfundo engcono.
Osolwazi bethu banolwazi lomhlaba wangempela. Bangakunika amakhono ongawasebenzisa emsebenzini wakho wamanje. Qala ukusebenzisa amakhono owafunda namuhla.
I-Canvas iyipulatifomu eku-inthanethi esiyisebenzisela ukulethwa kwezifundo online, okwenza ukuxhumana kontanga nokusekelwa kokufundisa kutholakale kalula. Imiyalezo esheshayo, amahora abonakalayo wehhovisi labafundisi, izinkulumo ezirekhodiwe, kanye nekhono lenkomfa yesikhathi sangempela konke kuyatholakala ku-Hodges University online online experience.
Yenza ushintsho ozokubonga ngakho ngokuzayo. Qala online namuhla!
Ngikulungele Ukufaka Isicelo Manje!
Amafomethi wokulethwa kweziqu kanye nezitifiketi
EHodges University, amadigri ethu amaningi asekolishi atholakala ngokuphelele online. Senze uhlu lwezinhlelo ze-master's, bachelor's, Associates, kanye nezitifiketi ezingathathwa online, kusuka noma yikuphi emazweni we-49 esisebenza kuwo.
O = Zonke Izifundo kulolu hlelo lweDegree zingagcwaliswa Ngokugcwele ku-inthanethi
B = Izifundo Ohlelweni Lweziqu Ziyi-Hybrid / Mixed. Ezinye izifundo zingaqedwa ngokugcwele ku-inthanethi futhi ezinye izifundo kufanele ziphothulwe On-Campus.
C = Zonke izifundo kulolu hlelo lweDegree kumele zibe yi-Complete On-Campus.
UHLELO LOKUPHAKATHI O B C
I-AA - Izifundo ezijwayelekile Yebo Yebo Cha
I-AA - Ukugxila Kwezobugebengu Yebo Cha Cha
I-AA - Idizayini Yedijithali Ne-Graphics Focus Yebo Yebo Cha
I-AA - Ukugxila Kwesayensi Yezempilo Cha Yebo Cha
NJENGOBA - Ukubalwa kwezimali Yebo Yebo Cha
AS - Ukuphathwa Kwebhizinisi Yebo Yebo Cha
AS - Computer Information Technology Yebo Yebo Cha
NJENGOBA - Izinsizakalo Zezimo Eziphuthumayo Cha Yebo Yebo
I-AS - Ukuphathwa Kwehhovisi Lokunakekelwa Kwezempilo Yebo Cha Cha
AS - Professional Ukuxhumana Yebo Yebo Cha
I-AS - Izifundo Zomthetho Yebo Cha Cha
AS - Physical Therapy Umsizi Cha Cha Yebo
BS - Ukubalwa kwezimali Yebo Yebo Cha
BS - I-Psychology esetshenzisiwe Yebo Cha Cha
BS - Ukuphathwa Kwebhizinisi Yebo Yebo Cha
BS - Ubuchwepheshe Bekhompyutha Yebo Yebo Cha
BS - Ubulungiswa Bezobugebengu Yebo Cha Cha
BS - Ezezimali Yebo Yebo Cha
BS - Isayensi Yezempilo Cha Yebo Cha
BS - Impilo Svs. Ukuphatha Yebo Cha Cha
Izifundo ze-BS - imikhakha eyahlukene Yebo Cha Cha
BS - Izifundo Zezomthetho Yebo Cha Cha
BS - Ukuphathwa Yebo Yebo Cha
BS - Ukumaketha kwanamuhla nokubeka uphawu lokushicilela Yebo Yebo Cha
BS - Ukuphepha kwe-cyber / Networking Yebo Yebo Cha
BS - Ubuhlengikazi Cha Cha Yebo
BS - Ukuthuthukiswa kweSoftware Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Ukuqanjwa kwe-AutoCAD Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Ukwakhiwa Kwezithombe Ezinyakazayo Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Ukuphathwa Kwemininingwane Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - I-E-Business Software Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - I-E-Business Ventures Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - EDiscovery / Litigation Yebo Cha Cha
ESL - IsiNgisi njengolimi lwesibili Yebo Yebo Yebo
Isitifiketi - Ukuphepha kwe-inthanethi Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Ukwehluka, Ukulingana Kokufaka Ubuholi Yebo Cha Cha
Isitifiketi - I-Forensic Accounting / Inkohliso Yokuhlolwa Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Ukukhiqizwa Kwe-Graphic Design Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Ukuxhaswa Kwedeski Losizo Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe Bolwazi Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Uchwepheshe Wenethiwekhi Yebo Yebo Cha
Isitifiketi - Uhlelo Lokuhlinzekwa Kokuqwashisa Ngokusetshenziswa Kwezidakamizwa Yebo Cha Cha
Isitifiketi - Isipiliyoni Somsebenzisi / Idizayini Yewebhu Yebo Yebo Cha
I-JM - Juris Master Yebo Cha Cha
I-Master - Accounting Yebo Cha Cha
I-Master - Ukuphathwa Kwebhizinisi Yebo Yebo Cha
I-MS - I-Applied Positive Psychology Yebo Cha Cha
Ukwelulekwa Nge-MS - Clinical Mental Health Yebo Yebo * Cha
MS - Ukuphathwa Yebo Yebo Cha
Sicela ubuze umeluleki wakho we-admissions ukuthola imininingwane esesikhathini kakhulu.
* Ubuncane babafundi be-12.
Ingabe Ukulungele Ukufunda Nge-Inthanethi?
Ukufunda online kudinga umqondo omuhle nokuzimisela ukubona umsebenzi uze uqede. Siyakholelwa kuwe, futhi siyazi ukuthi unakho okudingekayo ukuze ufunde ku-inthanethi. Kepha ngezidingo eziningi kangako ngesikhathi sakho, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ukuqonda ngokugcwele ukuthi yini ehilelekile ohlelweni oluku-inthanethi. Ukufunda ku-inthanethi akulula, kepha kungaba inketho ephakeme ekuvumela ukuthi uqedele imigomo yakho yokufunda ephakeme.
Qonda ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumfundi oku-inthanethi. Ukuvumelana nezimo kuyisihluthulelo sokufunda online. Ungafunda maqondana namashejuli omsebenzi wakho nawomndeni wakho, ngesikhathi onaso ngesikhathi sekhefu lakho lasemini naphambi noma ngemuva komsebenzi. Mhlawumbe ngawe, kusesekuseni kakhulu noma ngemuva kokuthi wonke umuntu elele. Noma ngabe lunjani uhlelo lwakho, kungenzeka ukuthatha amakilasi aku-inthanethi. Izifundo ezi-synchronous, asynchronous, technology-enhanced, simulcast, kanye nezifundo ezibukhoma ezikwi-inthanethi zonke zingatholakala endaweni yezemfundo ephakeme. Kungaba nezinselelo ezithile, futhi. Ukufunda nge-inthanethi kungathatha isikhathi esiningi kunokufunda kwendabuko (isibonelo: ikilasi lehora elilodwa elinenkulumo nengxoxo kungaphenduka isikhathi esithe xaxa ku-inthanethi ngemuva kokufunda inkulumo bese ubhala amaphuzu wengxoxo yakho ukuze kubukezwe umfundisi). Uma uvame ukudinga ukuqondiswa okuncane kusuka kuprofesa, ukufunda nge-inthanethi kungaba nzima kakhulu kunendawo yokufunda ehlanganisiwe. Sinikeza izindlela eziningi zokufunda; khetha okulingana nawe.
Izici ezenza abafundi be-inthanethi baphumelele kufaka phakathi amakhono amahle kakhulu okuxhumana abhaliwe, ikhono lokufunda nokuqonda isihloko ngokushesha nangempumelelo, amakhono eziqinile ezibalweni, ikhono (kanye nesifiso) sokusebenza ngokuzimela ngaphandle kokugadwa, nokuzazi ngokwanele ukubona indlela yakho yesikhathi esizayo ngenkathi uthatha isinyathelo sokuqala phikelela ngenselelo. Uzodinga ikhono lokuhlela isikhathi sokufunda nokulandela uhlelo lwakho olukhethiwe noma ngabe kuvela okuthile okungakuphambukisa. Ungakhathazeki uma amanye ala makhono ebonakala emakhulu. Abasebenzi bethu balapha ukwenza ukufunda kufinyeleleke kuwo wonke umuntu.
Amandla okwenza ukuxhumana okuhle nabantu abafanayo ngenkathi bafunda ku-inthanethi. Kulula kakhulu ukuphumelela uma unohlelo lokusekelwa oluhle ukukusiza ngohlelo lwakho lokufunda online. Uzohlangabezana nezinselelo ezithile, futhi zonke zazo zizokuzuzisa uma uphethe iziqu zakho esandleni sakho. Ukuba nezibonelo ezinhle nohlelo lokusekelwa olungakunikeza konke okudingayo ukuze ufinyelele umgomo wakho wokugcina kuhambisana nempumelelo yakho. Unakho lokhu!
Yazi isisusa sakho. Izizathu zokuthi kungani uthathe isinqumo sokuya esikoleni online zizothinta ikhono lakho lokufunda. Yazi futhi uqonde isisusa sakho sokukhetha ukubuyela esikoleni futhi ufunde ku-inthanethi. Kwabaningi, ukufunda nge-inthanethi kubavumela ukuthi baqhubeke nokusebenza ngenkathi bephishekela imfundo ephakeme ukuze bathole imali ethe xaxa. Gcina intshisekelo yakho phambili ukuze ukwazi ukuyikhumbula lapho ukufunda kubonakala kukhathaza noma kugaya. Uzotshala kokubili nakuwe nakuhlelo oluku-inthanethi. Isikhathi sakho singenye yezitshalomali ezinkulu kakhulu ozozenza. Umzamo owufaka esifundweni sakho esiku-inthanethi uzoqondana ngqo nokuthi usebenza kahle kangakanani ezifundweni zakho. Uzophinde futhi ube nokuzibophezela kwezezimali kuwe. Ukutshala imali emfundweni yakho kuzokunika inzuzo enkulu ekugcineni. Siyazi ukuthi ungakwenza, futhi ujule phansi, nawe wenze njalo!
Imininingwane Ye-Admissions Yesitshudeni eku-inthanethi nemigomo
IHodges University ayibandlululi ngokobuhlanga, ibala, inkolo, ubulili, ubulili, imvelaphi yobuzwe, ubudala, noma ukukhubazeka ekunikezelweni kwamathuba emfundo noma amathuba emisebenzi kanye nezinzuzo. Onke amalungu omphakathi waseNyuvesi aziswa ngokulinganayo. IHodges University ayibandlululi ngesisekelo sobulili noma sokukhubazeka ezinhlelweni zemfundo nemisebenzi eyenzayo, ngokuya ngezidingo zayo yonke imithetho nezimiso zombuso ezisebenzayo ezibandakanya, kodwa kungagcini lapho, Isihloko IX Sezichibiyelo Zezemfundo zango-1972 , Isigaba 504 soMthetho Wokuvuselelwa kowe-1973, kanye noMthetho waseMelika okhubazekile wango-1990. Lo mgomo udlulela kokuqashwa nokwamukelwa eHodges University.
Imibuzo ephathelene nesihloko IX, kufanele iqondiswe kusiqondisi se-Title IX:
UKelly Gallagher, Umxhumanisi Wesihloko IX 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966
Isihloko se-IX Training singatholakala lapha.
Imibuzo ephathelene nabaseMelika abakhubazekile kufanele iqondiswe kuMxhumanisi we-ADA:
UJosh Carcopa, Umqondisi Wolwazi Lwabafundi.
Imibuzo ngeposi kufanele ithunyelwe eFort Myers Campus kuleli kheli elilandelayo: Hodges University, Attn: ADA Coordinator, 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966.
Inyuvesi inelungelo lokwenqaba ukungena kofake isicelo uma isenzo esinjalo sithathwa njengesifanele lowo ofaka isicelo noma inyuvesi. Inyuvesi ayibemukeli abafakizicelo abanezinkolelo zobudlova noma zocansi ezinhlelweni zayo zokufunda. Abanye abafakizicelo abanerekhodi elibi bangagcwalisa Ifomu Lokudluliswa Kwezikhalazo zeFelony, elibuyekezwa yikomidi elincane leKomidi Lezokuphepha LeNyuvesi. Ikomidi elincane, isinqumo salo esingumnqamulajuqu, yilona elizonquma ukuthi lowo ozongenela ukhetho uya phambili yini ohlelweni lokwamukelwa kwabafundi.
Imizamo yokufunda eku-inthanethi eyunivesithi igadwe ubuholi bezemfundo besikole ngasinye esibheka ukuhlanganiswa kwezifundo nezinhlelo eziku-inthanethi ngenqubo yokufunda. Izifundo eziku-inthanethi nezinhlelo kwethulwa kusetshenziswa i-Canvas, uhlelo lokuphatha lokufunda eyunivesithi. Abafundi abathatha izifundo ezenziwa online badinga ukujwayela ipulatifomu ye-Canvas ngaphambi kokuthi baqale izifundo zabo.
Zonke izifundo eziku-inthanethi ezifundiswa eHodges University zingadinga ukuhlolwa kokugcina okwenziwe kuqala. Abafundi kudingeka bathathe izivivinyo zokugcina (ezidinga ikhamera yewebhu) phakathi nezinsuku ezibalulwe ku-portal ye-MyHUgo. Isifundo ngasinye esiku-inthanethi sinemali ehambisanayo yokwenza iprosesa (sicela ubheke isheduli yoHlelo lweziFundo neMali kwimigomo nemibandela yokubhalisa.
Abafundi be-inthanethi yokufunda / amabanga emfundo bangaqala isikhalazo nge-imeyili ku onlinelearning@hodges.edu.
Uma kwenzeka abafundi be-online / ibanga lemfundo bebona ukuthi isikhalazo asiphethwe kahle yisikhungo, abafundi bangahambisa isikhalazo kulowo oxhumana naye olandelayo:
a) Umphenyi wezikhalazo usebenza njenge isimo sikahulumeni indawo yokuxhumana yokuphendula imibuzo nokukhathazeka okuvela kubaphathi besikole esizimele kanye namahhovisi ohlelo.
Ombudsman Wezinsizakalo Ezilinganayo
b) Uma i-Ombudsman ingakwazi ukukusiza, xhumana ne-Office of Articulation eMnyangweni Wezemfundo.
Abafundi be-inthanethi yokufunda / amabanga emfundo abaphothule inqubo yezikhalazo yaseHodges University kanye nenqubo esebenzayo yezikhalazo zombuso bangafaka izikhalazo ezingezona ezifundiswayo kuMkhandlu Wokugunyazwa Kwe-Reciprocity Agreement yaseFlorida State Postsecondary Reciprocal Distance Education Coordinating Council (FL-SARA PRDEC). Ngeminye imininingwane ngenqubo yezikhalazo, sicela uvakashele Inqubo Yezikhalazo ye-FL-SARA ikhasi.
Lezi zinqubomgomo ezilandelayo ezisebenzayo (8.1 Amalungelo Nezibopho Zabafundi futhi Inqubomgomo Yezikhalazo Zabafundi) zishicilelwa eHodges University student Handbook engatholakala lapha.
Izidingo Zokufunda Eziku-inthanethi
Buka Ikhathalogi Yethu Ngokucacile Mayelana Nokufunda Okuku-inthanethi
Faka isicelo namuhla!